Umongameli Ramaphosa wamukela ubukhosi buka Misuzulu – The Ulwazi Programme
Umongameli Ramaphosa wamukela ubukhosi buka Misuzulu
Umongameli wakuleli uMnumnzane Cyril Ramaphosa uveze ukuthi uyakwamukela futhi uyakweseka ukubekwa kweSilo esisha sakwaZulu iNkosi uMusizulu njengomholi osemthethweni wasifunda. Ngomhlaka 16 Mashi 2022 ngokomthetho sisekelo wakulelizwe “Section 8(3)(a) and (b) of the Traditional and Khoi-San Leadership Act, 2019” uMnumzane Ramaphosa wamukele ukuhlala esihlalweni sobukhosi kuka Misuzulu Sinqobile Zulu njenge Nkosi yaMaZulu. Lokhu kulandela emva kokuba uMisuzulu wayekade ebekwe ngundlunkulu uMantfombi Dlamini ngonyaka ka-2021. Ukubekwa kuka Misuzulu njenge nkosi kususe olukhulu udweshu endlunkulu. Kukhona abaphikisana nalesi sinqumo, kodwa ke manje kubukeka sengathi lendaba isifike kuvuthondaba. Kuloludaba lokubangwa kwesihlalo sobukhosi, uhulumeni bekuwudaba angangenanga wagamanxa kulona njengoba phela ubengeke akwazi ukukhetha uhlangothi odabeni lwasendlunkulu.
Isithombe: Sithathwe ekhasini leSilo kuTwitter
Noma uhulumeni enawo amandla okungenelela ngenxa yokuthi kukhona umnyango we-Department of Corporate governance and Traditional Affairs okunguMnyango Wezomdabu naMasiko kodwa kwezinye izinto awunawo amandla phandle uma kuyinkinga engaxazululeki. Umthethosisekelo wakuleli uvumela umndeni uthathe isinqumo ngokuthi ubani okumele athathe isihlalo sobukhosi. Ingakho ke nakuloludaba inkundla yendlalelwe yena uNdunankulu wakwaZulu kanye Nomnyango Wezomdabu ukuthi nawo udlale indima yawo. Ezikhulumela ngowakhe umongameli uthi ukubekwa ngoku semthethweni kwenkosi uMisuzulu yisikhathi esihle sokuziqhenya ngomlando omuhle wesizwe samaZulu. Wathi inkosi ibekwa nje ilandela amaningi amakhosi asesifundeni sakwaZulu esilwelile isizwe saMaZulu ukuvikela inhlalakahle yaso nokudlondlobala kwaso. Uthe umongameli uzibandakanye nabo bonke abafisela inkosi ubukhosi obude nobudlondlobele.
The current sitting president of South Africa, Honourable Ramaphosa, conveys his warmest wishes to his majesty, King Misuzulu Zulu, on the occasion of his legal recognition as King of AmaZulu Kingship.
Categories Culture, History, People Tags Misuzulu, Ubukhosi